တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်များ၏ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူ အငြိမ်းစားရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Choi Yoon-hee အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ – ၃၁
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်များ၏ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူ အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Choi Yoon-hee အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်များ၏ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး(အငြိမ်းစား) နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa နှင့်စစ်သံမှူး Colonel HWANG Sandeok နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီး ခဲ့သည့် သန်လျင်မြို့၊ အမှတ်(၃)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ကျောင်းဆောင်သစ် တစ်ဆောင်အား ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကူညီဆောက်လုပ်ပေးခဲ့မှုများနှင့် အခြားဒေသများတွင်လည်း ထပ်မံဆောက်လုပ်ပေးသွားမည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေ များ၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ထာဝရတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် နျူကလီးယားကင်းမဲ့ဇုန်ဖြစ်စေရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှရပ်တည် ထောက်ခံပေးသည့်အခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေးအတွက် အဆင့်အလိုက်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန် အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်များ၏ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူ အငြိမ်းစားရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Choi Yoon-hee တို့သည်အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။
နပွေညျတျော၊ ဒီဇငျဘာ – ၃၁
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ၊ ပူးတှဲ စဈဦးစီးအရာရှိခြုပျမြား၏ ဥက်ကဋ်ဌဟောငျးဖွဈသူ အငွိမျးစားရတေပျဗိုလျခြုပျကွီး Choi Yoon-hee အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ၊ ပူးတှဲစဈဦးစီးအရာရှိခြုပျမြား၏ ဥက်ကဋ်ဌဟောငျးဖွဈသူ ရတေပျဗိုလျခြုပျကွီး(အငွိမျးစား) နှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကိုရီးယားသမ်မတ နိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa နှငျ့စဈသံမှူး Colonel HWANG Sandeok နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေးအတှကျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ နာဂဈမုနျတိုငျး တိုကျခတျမှုကွောငျ့ ပကျြစီး ခဲ့သညျ့ သနျလငျြမွို့၊ အမှတျ(၃)အခွခေံပညာအထကျတနျးကြောငျး၊ ကြောငျးဆောငျသဈ တဈဆောငျအား ကိုရီးယားနိုငျငံမှ ကူညီဆောကျလုပျပေးခဲ့မှုမြားနှငျ့ အခွားဒသေမြားတှငျလညျး ထပျမံဆောကျလုပျပေးသှားမညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှငျ့ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားတှငျ ကိုရီးယားနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးနသေညျ့ အခွအေနေ မြား၊ ကိုရီးယားကြှနျးဆှယျ ထာဝရတညျငွိမျ အေးခမျြးရေးနှငျ့ နြူကလီးယားကငျးမဲ့ဇုနျဖွဈစရေေး အတှကျ မွနျမာနိုငျငံမှရပျတညျ ထောကျခံပေးသညျ့အခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာစရေေးအတှကျ အဆငျ့အလိုကျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျ အလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေး ခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ ကိုရီးယား သမ်မတနိုငျငံ၊ ပူးတှဲစဈဦးစီးအရာရှိခြုပျမြား၏ ဥက်ကဋ်ဌဟောငျးဖွဈသူ အငွိမျးစားရတေပျဗိုလျခြုပျကွီး Choi Yoon-hee တို့သညျအမှတျတရ လကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျပွီး စုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွပါသညျ။